Saamaynta ay IQ ku leedahay waxqabadka tacliimeed: laga bilaabo bilawga ilaa dhammaadka dugsiga - Tababbarka Garashada
Halkan ayaad joogtaa: Bogga ugu weyn » Articles » Saamaynta ay IQ ku leedahay waxqabadka tacliimeed: laga bilaabo bilawga illaa dhammaadka dugsiga
Imtixaannada heerka aqooneed hadda waxay galeen ficil caafimaad oo ku saabsan da'da koritaanka, gaar ahaan marka qiimeynta cunugga ama qaangaarka ay khuseyso dhinacyada garashada.
Tusaalaha caadiga ah ayaa ah cilladaha khaaska ah ee waxbarashada: Qiimaynta ogaanshaha waxaa ka mid ah, shuruudaha kale, ka reebitaanka jiritaanka cillad maskaxeed; Ujeedadaas awgeed, tababarku wuxuu saadaalinayaa isticmaalka imtixaannada IQ (IQ), badanaa waxyaabo badan oo muhiim ah sida WISC-IV. Tijaabadani waxay ku saleysan tahay waxa loogu yeero qaabka CHC si loo cabiro awooda garashada xaddidan e weyn.
Qaabka 'CHC' wuxuu saadaalinayaa 3 lakab oo kala sarayn ah: xagga sare waxaa ku jira cabiirka g, midka aan u gudbin karno markaan ka hadlayno sirdoonka adduunka ee qofka, midka la filayo inuu ka dhasho cabirka QI; heerka dhexe waa inay jiraan qaar guud guud laakiin weli arrimo ballaadhan (tusaale ahaan, sirdoonka dareeraha, sirdoonka qayliyay, Thewaxbarashada iyo aragtida muuqaalka); heerka ugu hooseeya waa inay jiraan xirfado gaar ah oo dheeri ah (tusaale ahaan, iskaan-dhigga goobta, codbixinta codka).
WISC-IV, sida tijaabooyinka kale, waxay inta badan diirada saartaa labada lakab ee ugu sareeya: g factor (markaa IQ) iyo qodobada balaariyay ee lakabka labaad (tusaale ahaan, fahamka afka ahisaga sababaynta aragtida-fikirka ah, ka xusuusta shaqada iyo xawaaraha processing).
Si kastaba ha noqotee, xaalado badan IQ uma muuqdo mid la turjumi karo kala duwanaansho weyn oo udhaxeeya dhibcaha kala duwan ee laga helay gudaha WISC-IV; tani waa kiiska cilladaha waxbarasho ee gaarka ah (SLD): marka loo eego qiyaasaha qaarkood, boqolkiiba 50% muuqaalka aqooneed ayaa tusi lahaa khilaafaadyada ka dhigaya IQ tiro aan macno lahayn. Xaaladahaas oo kale, khubarada cilminafsiga ee fulisa qiimeynta noocan ah waxay u muuqdaan inay in badan ku sii nuuxnuuxsadaan waxyaabaha ku saabsan lakabka labaad, iyagoo falanqeynaya meelaha ay ku xoogan yihiin iyo kuwa ku liita
Hadalkan oo dhan, dhinacyada qaar badiyaa waa la iska indhatiraa:
Waa imisa heerka aqoonta (QI) waa mid caalami ah la xidhiidha dhibaatooyinka waxbarasho?
Immisa ayaan arrimaha lakabka labaad, kuwaas oo inta badan lagu cabiro tijaabooyin dhowr nooc oo IQ ah, waa saadaaliyayaasha guusha tacliinta?
In 2018, Zaboski iyo asxaabtiisuba waxay isku dayeen inay ka jawaabaan su'aashan iyagoo dib u eegay cilmi baaris la daabacay oo ku saabsan mowduucan intii u dhaxeysay 1988 ilaa 2015. Gaar ahaan, waxay eegeen daraasado lagu qiimeeyay heerka aqooneed ee miisaanka maaddooyinka badan si IQ iyo kuwa kale arrimuhu waxay la xiriireen waxbarashada dugsiga. Gaar ahaan, marka lagu daro QI, cilmi baaris la tixgaliyay ayaa la xushay sababaynta dareeraha, Warbixin guud (oo aan sidoo kale tixraaci karno sida sirdoonka qayliyay), xusuusta muddada-dheer, ka shaqaynta muuqaalka, maqalka maqalka, xusuusta muddada-gaaban, xawaaraha processing.
Maxay heleen cilmi baarayaashu?
Xirfadaha la ballaariyey badankood waxay awood u yeelan doonaan inay sharxaan wax ka yar 10% ee heerka tacliimeed ee ay gaareen e aan ka badnayn 20%, iyada oo aan loo eegin da'da la tixgelinayo (muddo u dhexeysa 6 illaa 19 sano jir). Halkii, IQ wuxuu sharxi lahaa celcelis ahaan 54% ee guusha waxbarasho (wuxuu u dhexeeyaa ugu yaraan 41% akhriska da'da 6-8, ilaa ugu badnaan 60% xirfadaha aasaasiga ah ee xisaabta, markale da'da 6-8).
Xirfadaha la ballaariyey waxaa ka mid ahWarbixin guud waxay u muuqataa inay tahay tan ugu dhow ee la xiriirta waxbarashada dugsiga qaarkood, gaar ahaan xirfadaha akhriska iyo fahamka qoraalka; labada xaaladood kala duwanaanta la sharaxay waa 20%.
Dhinaca kale, waxa xiiso leh in la ogaado isku-xirnaanta liidata ee ka dhexeysa sababaynta dareeraha iyo ku dhowaad dhammaan barashada iskuulka oo lagu qiimeeyey falanqaynta qaabkan. Waxa kaliya ee ka reeban ayaa ah xirfadaha xisaabeed ee aasaasiga ah ee kooxda da'da 9-13 (11% kala duwanaansho la sharaxay) iyo xirfadaha xalinta dhibaatooyinka xisaabta ee kooxda da'da 14-19 (11% kala duwanaansho la sharaxay).
Xogtani waxay u baahan tahay milicsiga isticmaalka tijaabooyinka hal-abuurka leh sida Raven's Matrices Progressive (weli maanta inta badan waxaa loo isticmaalaa baaritaanka kaliya ee garashada ee qiimeyno badan oo lagu ogaanayo) kuwaas oo diiradda saaraya kaliya sababaha dareeraha.
Joogitaanka ku dhowaad gaar ah ee xiriirka daciifka ah inta udhaxeysa xirfadaha balaaran ee qaabka CHC iyo barashada iskuulka, waxay soo jeedineysaa taxadarka tarjumaada iyo sameynta saadaalinta iyadoo lagu saleynayo tilmaamahan (tusaale ahaan, waxqabadka tacliinta ama jiritaanka naafonimada waxbarashada)
Isku soo wada duuboo, sida ku xusan xogta cilmi baaristaan, wadarta dhibcaha miisaanka aqooneed ee isku dhafan, ee ah IQ, waxay umuuqataa inay tahay xogta kaliya ee si xoogan uguxiran waxqabadka iskuulka.
Waxa kale oo aad jeclaan kartaa:
Heerka waxbarashadu ma saameynaysaa heerka aqooneed?
Awoodda garashada sare iyo cilado waxbarasho oo gaar ah
ADHD iyo IQ. Dhinacyadee ayaa saameyn ku leh waxqabadka dugsiga?
Xiriirka ka dhexeeya hal-abuurka, sirdoonka iyo howlaha fulinta
Taariikhda aqooneed ee WISC-IV ee cilladaha waxbarashada gaarka ah
Zaboski II, BA, Kranzler, JH, & Gage, NA (2018). Falanqaynta Meta ee xiriirka ka dhexeeya hanashada tacliinta iyo awooda ballaaran ee aragtida Cattell-Horn-Carroll. Joornaalka cilmu-nafsiga dugsiga, 71, 42-56.
sirdoonka, caqli iyo barasho, qi, IQ iyo barasho, IQ iyo barashada iskuulka
Saamaynta ay IQ ku leedahay waxqabadka tacliimeed: laga bilaabo bilawga illaa dhammaadka dugsiga2020-12-062021-01-01http://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2017/08/nuovologo_87e9aa904327d53301f73f9191e17e49.pngTababbarka garashadahttps://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2020/12/qi-e-rendimento-scolastico2.png200px200px
Wuxuu la tacaalaa neuropsychology xagga koritaanka, qaangaarka iyo da'da da'da. Wuxuu hadda ka shaqeeyaa dhowr mashruuc oo ku saabsan dhinacyada garashada ee cudurada neurodegenerative qaarkood.
ADHD oo lagu daray-hibeyntaADHD, Maqaallo, Sirdoon
Caqli-darrada cilladaha waxbarashada gaarka ah: hadiyad dheeri ah ma joogtobaa?Maqaallo, DSA, Sirdoon